Fampiofanana tavoahangin-drano - Fanatanjahan-tena tsara indrindra. Bezzia
Susana godoy | 21/09/2021 16:00 | fanatanjahan-tena
Ka dia tsy miteny ianao hoe tsy afaka miofana ao an-trano raha tsy manana fitaovana! Satria mila saina kely foana ianao ary amin'ity tranga ity dia tsy izany. ny fanofanana tavoahangin-drano Zava-misy amin'ny fotony rehetra io rehetra io saingy mamela antsika hanana vokatra tsara ihany koa ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba hanatanterahantsika azy.
Mazava ho azy, voalohany indrindra tokony ho fantatrao fa tsara kokoa ny manomboka amin'ny lanjany ambany raha tsy zatra izany ianao. Tsy maintsy ampitombointsika amin'ny fomba mandroso hatrany izany. Ka noho io voalaza io dia azonao atao mahazoa tavoahangy roa amin'ny vola ilainao ary apetraho amin'ny toe-javatra ianao satria nanomboka izahay.
1 Fampiofanana tavoahangin-drano: fisokafan'ny karazana marindrano
2 Boribory bisikileta
3 Ahoana ny fomba fanaovana squats amin'ny tavoahangin-drano
4 Fanosehana sy famoahana
5 Crunches miolakolaka
Fampiofanana tavoahangin-drano: fisokafan'ny karazana marindrano
Hanombohana dia tsy maintsy lazaina fa rehefa miresaka momba ny fisokafana atsivalana isika dia tsy maintsy milaza an'izany tsy ny sandry ihany no hiasanay fa ny tratra koa ny lamosina sy ny soroka. Raha ny zavatra hitantsika dia hanao asa tanteraka ho an'ny vatana ambony isika. Satria na amin'ny ambaratonga kely kokoa aza dia ho hitantsika be dia be izany. Noho izany, tsy misy toa ny manomboka amin'ny tavoahangy amin'ny tànana tsirairay sy manokatra ny tananao mitsivalana fa azonao avela somary miondrika ny kiho. Ny zavatra ataony dia ny fanaovanao fanatanjahan-tena somary miadana mba hahafahana mifantoka tsara sy miasa tsara kokoa.
Ity dia iray amin'ireo fanazaran-tena tena ilaina ary mazava ho azy izay malaza indrindra. Tsy tokony hitranga izany amin'ny fanazaran-tena mendrika ny sira ary noho izany amin'ny fampiofanana amin'ny tavoahangin-drano koa. Raha izany dia hiasa izahay manomboka amin'ny biceps brachii ka hatrany amin'ny deltoid sy ny extensions ary koa ny flexors. Izy rehetra dia te-hanohana anao amin'ny fampiharana tianao. Mba hanatanterahana azy dia manomboka amin'ny toerana misy anao ianao amin'ny sandrinao manenjana mankany ambany. Eny, amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia mbola hanana ny tavoahangin-drano isika. Noho izany, dia ny fitondrana azy ireo any amin'ny tratra amin'ny alàlan'ny famolahana ny sandry. Azonao atao ny manao andiany telo amin'ny famerimberenana 20 eo ho eo. Mazava ho azy fa afaka miovaova ianao ary tsy mijanona amin'ny haavon'ny tratra miaraka amin'ny tavoahangy, atsangano ambonin'ny sandrinao ny sandanao.
Ahoana ny fomba fanaovana squats amin'ny tavoahangin-drano
Raha manana siny dimy litatra ianao dia afaka manao ilay fanatanjahan-tena amin'ny fomba feno kokoa. SATRIA tsy maintsy mamihina azy fotsiny ianao ary midina hanao ny squat toy izany. Hanao miadana ianao ary hanana fandanjalanjana tsara ny vatana, dia aleonao hatrany manantona mivalona amin'ny rindrina. Satria raha manana lanja betsaka amin'ny rano ianao dia mety hanome fanovana kely na fihetsika tampoka izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana isika. Rehefa hidina ny fidinana dia manandrama mitazona mandritra ny segondra roa alohan'ny hiakaranao ary avereno avereno ny fampiharana.
Fanosehana sy famoahana
Raha ny fanovana ny fanazaran-tena dia tsy azontsika atao ny manadino hevitra toy izao. Satria na dia zava-dehibe aza ny fanosehana amin'ny zava-mahazatra rehetra, dia tsy maintsy hajanona miaraka amin'ny tavoahangin-drano izy izao. Nitsotra tamin'ny tany àry izahay. Rehefa manao an'ity fampiharana ity dia azonao atao amin'ny fomba samihafa. Izany no azonao atao aloha ny manosika dia avy eo manana rano tavoahangy iray ary avereno, mba hanao toy izany koa amin'ny iray hafa. Tsy maintsy mitazona ny fandanjalanjanao ianao ary aza mampidina ny vatanao be loatra na manangona azy io rehefa manova ny tavoahangy izahay.
Tsy fanatanjahan-tena sarotra izany fa iray amin'ireo manintona indrindra ny faritra afovoan'ny vatantsika. Noho izany, raha nieritreritra isika fa tsy ampy izany, dia hataontsika manasarotra azy amin'ny tavoahangin-drano. Mipetraka izahay, manondrika ny ranjontsika ary mampiakatra azy kely. Ankehitriny dia raisinay ny tavoahangy, na tavoahangy, ary atodintsika any amin'ny lafiny iray ny vatana. Toy ny hoe te-hametraka ilay tavoahangy voalaza amin'ny andaniny roa isika. Mora ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fanofanana tavoahangin-drano